Telo azo antoka indrindra sy ny tsara indrindra ny mampifandanja ny môtô tena nandinika - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Power-hanampy Kid Scooter
Self ny mampifandanja ny scooter
Telo azo antoka indrindra sy ny tsara indrindra ny mampifandanja ny môtô tena nandinika
Ny hoverboard dia noraisin'ny tanora kokoa ny olona, satria izy ireo manam-petra dia afaka nahazo sambatra sy nahafinaritra tamin'ny mitaingina hoverboard, fa ny fomba hanaovana safidy azo antoka tena mahay mampifandanja scooter? Aoka ho fahazoan-dalana telo azo antoka sy tena tsara indrindra ho anareo mahay mampifandanja scooter. Ny voalohany dia ny KOOWHEEL marika Self fahaiza-mandanjalanja Board K7 tamin'ny 2272 Ul Certification sy marani-tsaina LG bateria. Ny 2 Wheel Self ny mampifandanja ny Scooter K7 Bluetooth naterak'ireo kodiarantsika roa 8.5inch tsara Self ny mampifandanja ny Scooter HoverboardTires mafy Hummer- mitondra traikefa tsara ho anao! Izany dia manasongadina ny kely teknolojia hafa noho ny hafa hoverboards, mamela azy hampiasa matanjaka kokoa Motors, ny 8.5inch kodiarana no mahafinaritra eo amin'ny vovoka sy ny ahi-maitso, na dia, tsy ho inflatable, dia mbola hahatsapa be dia be ny hovitrovitra tamin'ny uneven terrains. Taorian'ny iray andro, na mijery eny tontolo eny, isika dia afaka hahazo ny 15-20km ity hoverboard. Ny tena velocity any 12km isan'ora. Mety misy angamba dia tamin'ny ambonin'ny ho miakatra inclines noho ny mahery Motors. Tena mahagaga mety ho seamlessly hitondra anareo amin'ny toerana iray ny iray hafa, hiahotra rehefa tanteraka ny tany noho izay mandeha. Ny hoverboard mamaly ny didinao tena fotsiny ary tsy ela ny hahatakatra azy io.
Iray hafa nandefa KOOWHEEL tena mahay mampifandanja hoverboard K5 UL2272 sy ASTM fanamarinana amin'ny lafiny roa Bluetooth sy ny jiro LED. Izany ihany koa dia manana tahony teo afovoany, dia mora kokoa ny hitondra. Ao amin'ny teknolojia, Modular rafitra, mainka moa tariby, azo antoka kokoa, tsininy ambany be ny tahan'ny (3 isaky ny arivo amby iray alina), ary azo antoka kokoa. Io tena mahay mampifandanja hoverboard dia tsy manam-paharoa izay endriky ny fitaterana dia mahazo mandeha na aiza na aiza ao amin'ny tanàna raha mbola ny herinaratra mandeha bateria mitandrina izany. Noho ny tanana-bisikileta mandeha maimaim-poana amin'ny alalan'ny asa isan'andro toy ny asa, sampam-pianarana, na anyplace-kafa no mahasakana tsara ho fahatoniany sy manatanteraka anjara.
Koowheel tato ho ato nandefa ny mamoritra herinaratra scooter amin'ny zava-baovao patanty lamaody mangatsiatsiaka endrika izay mamela ny mpandraharaha mba manana ny vaovao tsara indrindra. Asehoy ny LED lamba mampiseho tanteraka ny bateria sy ny hafainganam-pandeha. Light fa mavitrika.
Amin'ny ankapobeny, ny Segway be voninahitra hoverboard efa nanendry ny fepetra takiana amin'ny fandrosoana teknolojika SY FIALAM-BOLY. Farany ny tatitra malaza fa ny mba hihaona maro Segway fivezivezena malalaka ilain'ny tsena, mety hanamora ny famindrana ny samy hafa karazana fitaterana, ary ho toy ny mpisolo toerana amin'ny fiara.
Post fotoana: Aug-23-2017
Misaotra anao TIME
Block 1, No.1 ChiTian East Road, BaiShigang Village, Changping Town, Dongguan City 523570, Shina (40000 ㎡)
© Copyright - 2015-2021: All Rights Reserved. Hery, dia Koowheel.com